FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SNORKIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Snorkie
Alika kely mifangaro Schnauzer / Yorkie mifangaro
Brandy the Snorkie tamin'ny 8 volana - Mini Schnauzer ny reniny ary rainy i Yorkshire Terrier.
Ny alika Snorkie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Miniature Schnauzer ary ny Yorkshire Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Reesie ilay Snorkie mandritra ny 3 volana, milanja 3 lbs.- 'Raha mbola tanora kokoa ny amboara Reesie dia mainty sy mainty izy, nefa ankehitriny dia manomboka mihamainty ny tarehiny. Ny reniny dia Mini Schnauzer misy sira sy dipoavatra ary Yorkie ny rainy! Ny volony dia palitao malefaka an'ny Yorkie, ary avy aiza ny lokony mainty sy mainty, saingy somary olioly ny volony ary manana ny mariky ny Mini Schnauzer. Schnauzer fotsiny no fijoroany, kanefa manana ny halehany kely Yorkie izy. '
Tucker the F1b Snorkie puppy amin'ny 8 herinandro - 'Naka sary ity aho 2 andro taorian'ny nitondranay an-trano an'ity lehilahy ity. Fifaliana izy. Ny rainy dia Snorkie ary ny reniny dia Mini Schnauzer. Ity no Snorkie voalohany hitako ary nalefany avy hatrany ny foko! '
Teddy Bear the Snorkie tamin'ny 12 herinandro, milanja 1,12 pounds - Schnauzer fotsy ny reniny ary Yorkie ny rainy.
Bailey sy Brandy the Snorkies tamin'ny 8 volana - Mini Schnauzer ny renin'izy ireo ary ray Yorkie.
Bailey the Snorkie tamin'ny 8 volana - Mini Schnauzer ny reniny ary rainy Yorkie.
'Nahazo an'i Sophie sy Topher tao amin'ny fialofana tsy mpamono olona Alaqua Animal any Freeport, FL aho. Noraisiko i Sophie fony izy tokony ho 3 volana ary avy eo naka ny fako farany tamin'ireo mpiray tam-po aminy tany Alaqua, Topher, fony izy tokony ho 7 volana. Tena marani-tsaina izy ireo! izy ireo aza misakafo miaraka amin'ny sakafo ao anaty zana-boriborin'izy ireo mandra-pilaoko ny baiko ary raiso haingana dia haingana ny zavatra. Izay sendra tonga dia mitia azy avy hatrany. Manoro ny tokotanin-trano mimanda aho satria manana angovo LOTS! '
Ity zazavavy kely tsara tarehy ity dia fifangaroana Yorkshire Terrier / Miniature Schnauzer (Snorkie).
Yorkshire Terrier / Miniature Schnauzer mix (Snorkie)
Huey the Snorkie (Yorkie / Mini Schnauzer) alika kely amin'ny 6 volana— 'Alika marani-tsaina izy ary manana angovo be.'
Huey the Snorkie (Yorkie / Mini Schnauzer) alika kely amin'ny 6 volana
Missy the Schnauzer / Yorkie mifangaro alika kely amin'ny 4 volana
Shetland mpiandry ondry sisin-tany collie mix
firy ny yorkie alika kely no manana
lavaka mainty sy fotsy
pitbull husky mix puppy ihany
teratany alika tandrefana